मनोरञ्जन – Himalay Online Media
अभिनेत्री केकी अधिकारी अमेरिका उडेकी छन् । विवाह भएको एकसातामै उनी अमेरिका उडेकी हुन् । रोहित तिवारीसँग बिवाह गरेकी उनी अमेरिका भने एक्लै उडेकी छन् । उनको साथमा अभिनेत्री तथा कार्यक्रम प्रस्तोता रीमा विश्वकर्मासँगै छिन् । उनी ‘मेरो डान्स कप यूएसए’ नामक टीभी रियालिटी शो’को निर्णायक बन्न अमेरिका उडेको बताइएको छ । रीमा उक्त कार्यक्रमको […]
फ्रान्सेली गायिका, कलाकार रिजाइनको ९२ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको छ। रिजाइनको मृत्युबारे उनकी नातिनीले पुष्टि गरेकी हुन्। उनको आइतबार बिहान स्थानीय समय अनुसार ११ बजे मृत्यु भएको हो। ‘रातकी रानीले हामीलाई छोडेर गइन्।’ रिजाइनको परिवारसँग नजिक रहेकी साथीले भनिन्। रिजाइनले डिक्सो संगीतको आविष्कार स्व–घोषणा गर्दै आएकी थिइन्। उनले सन् १९५० मा पेसिरमा ‘नाइटक्लब’ खोलेकी थिइन्। […]
दोस्रो विश्वयुद्धमा ३० वर्षसम्म टापुमा लुकेर बसेका यी सैनिक
डिसेम्बर १९४४ः दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तिम महिनामा ‘हिरु ओनोडा’ नामक जापानी लेफ्टिनेन्ट फिलिपिन्सको एउटा सानो टापु लुबाङमा तैनाथ थिए। उनको आगमनको केही हप्ता भित्रमा अमेरिकी आक्रमणले गर्दा जापानी लडाकुहरूलाई जङ्गलमा पुग्न बाध्य बनायो। तर, आफ्ना अधिकांश साथीहरू भन्दा फरक ओनोडा लगभग ३० वर्षसम्म टापुमा लुकेर बसे। जापानी सरकारले उनलाई १९५९ मा मृत घोषणा गर्‍यो। तर वास्तविकतामा […]
अनलाइनमा आफ्नो मतदाता परिचयपत्र छ कि छैन ?
शमलव आठ डिग्री र सबैभन्दा धेरै विराटनगरको अधिकतम तापक्रम २६ दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।काठमाडौं । सरकारले आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कूल ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचन आयोगले मंगलबारदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक […]
त्रिनपा मेयरमा स्वच्छ छबी भएका हरि बहादुर राउतको उम्मेदवारी, यस्तो छ चुनाबी घोषणा पत्र
तपाईंको फेस नाइस छ, थुतुनो भएन: केशव स्थापित
मेयरको दादागिरी -सेवाग्राहीलाई सेवा दिन्न ! महागढ़िमाई नगरपालिका बारा